Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere ‘A Zọpụtahaala Mmadụ, A Zọpụtachaala Ya’?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mba. Baịbụl anaghị akụzi na ‘a zọpụtahaala mmadụ, a zọpụtachaala ya.’ Onye a zọpụtarala n’ihi na o nwere okwukwe na Jizọs Kraịst nwere ike kwụsị inwe okwukwe mezie ka a ghara ịzọpụta ya. Baịbụl kwuru na mmadụ kwesịrị ịgbasi mbo ike ma ọ bụ “lụsie ọgụ ike” ka okwukwe ya ghara ịnyụ ka ọkụ. (Jud 3, 5) A gwara Ndị Kraịst bụ́ ndị nabatarala Kraịst, sị: “Jirinụ egwu na ịma jijiji na-eme ihe ga-ewetara unu nzọpụta.”—Ndị Filipaị 2:12.
Amaokwu Baịbụl ndị gosiri na Baịbụl anaghị akụzi na ‘a zọpụtahaala mmadụ, a zọpụtachaala ya’
Baịbụl gwara anyị ka anyị zere mmehie ndị ga-eme ka mmadụ ghara ịba n’Alaeze Chineke. (1 Ndị Kọrịnt 6:9-11; Ndị Galeshia 5:19-21) Ihe ahụ Baịbụl kwuru agaghị aba uru ma ọ bụrụ na e nweghị ihe ga-eme ka a ghara ịzọpụta mmadụ. Kama, Baịbụl gosiri na onye a zọpụtarala nwere ike ịlaghachi mewekwa mmehie dị oké njọ, a gharazie ịzopụta ya. Dị ka ihe atụ, Ndị Hibru 10:26 kwuru, sị: “Ọ bụrụ na anyị elezie anya na-eme mmehie mgbe anyị nwetasịrị ezi ihe ọmụma nke eziokwu ahụ, ọ dịkwaghị àjà ọ bụla fọrọ a ga-achụ maka mmehie.”—Ndị Hibru 6:4-6; 2 Pita 2:20-22.
Jizọs ji ihe atụ banyere osisi vaịn na alaka ya mee ka o doo anya na anyị kwesịrị ịna-eme ka okwukwe anyị sie ike. O kwuru na ya bụ osisi vaịn, ndị na-eso ụzọ ya abụrụ alaka vaịn ahụ. Ụfọdụ n’ime ha ga-eji mkpụrụ ha na-amị ma ọ bụ àgwà ha gosi na ha nwere okwukwe na Jizọs. Ma e mechaa, ha ga-akwụsị inwe okwukwe. A ga-atụpụkwa ha dị ka alaka na-anaghị amị mkpụrụ, nke pụtara na a gaghịzi azọpụta ha. (Jọn 15:1-6) Pọl onyeozi mekwara ụdị ihe atụ ahụ. O kwuru na ‘a ga-egbupụ’ Ndị Kraịst kwụsịrị inwe okwukwe.—Ndị Rom 11:17-22.
E nyere Ndị Kraịst iwu ka ha ‘na-eche nche.’ (Matiu 24:42; 25:13) A gaghị azọpụta ndị na-ehi ụra ime mmụọ, ya bụ, ndị na-arụ “ọrụ ndị dịịrị ọchịchịrị” ma ọ bụ ndị na-anaghị eme ihe Jizọs nyere n’iwu.—Ndị Rom 13:11-13; Mkpughe 3:1-3.
Ọtụtụ amaokwu Baịbụl gosiri na ndị a zọpụtarala kwesịrị ịna-atachi obi, na-efekwa Chineke ruo ọgwụgwụ. (Matiu 24:13; Ndị Hibru 10:36; 12:2, 3; Mkpughe 2:10) Ndị Kraịst n’oge ochie nwere obi ụtọ mgbe ha nụrụ na ụmụnna ha ka na-atachi obi. (1 Ndị Tesalonaịka 1:2, 3; 3 Jọn 3, 4) Ọ bụrụ na a ga-azọpụta ndị na-atachighị obi ruo ọgwụgwụ, Baịbụl ọ̀ gaara ekwu na anyị kwesịrị ịnọgide na-atachi obi?
Ọ bụ naanị mgbe Pọl onyeozi na-aga ịnwụ ka obi siri ya ike ikwu na a ga-azọpụta ya. (2 Timoti 4:6-8) Tupu mgbe ahụ, ọ ma na ọ bụrụ na ya emewe ihe anụ ahụ́ ya chọrọ, a gaghị azọpụta ya. O dere, sị: “M na-etipụta ahụ́ m ọnyá, na-achị ya dị ka ohu, ka m wee ghara ịghọ onye a jụrụ ajụ n’ụzọ ọ bụla, mgbe m kwusasịịrị ndị ọzọ ozi ọma.”—1 Ndị Kọrịnt 9:27; Ndị Filipaị 3:12-14.
Ihe Mmadụ Kweere na Otú E Si Efe Chineke Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ị gụọ akụkọ Job, Lọt, na Devid, bụ́ ndị nwere oge ha mere ihe dị oké njọ, ị ga-amata azịza ya.
Gịnị Bụ Nzọpụta?
Gịnị Bụ Mmehie Na-enweghị Mgbaghara?